Burundi oo ka hortimid in la yareeyo tirada ciidamada ka jooga Soomaaliya. – Hornafrik Media Network
Burundi oo ka hortimid in la yareeyo tirada ciidamada ka jooga Soomaaliya.
By Liibaan Nuur	 On Dec 24, 2018
Muqdisho-(Hornafrik)-Dowladda Burundi ayaa ka hortimid Codsi uu u diray ururka Midowga Africa kaasi oo ahaa in ay Ciidanka Jooga Soomaaliya ay ka dhinto Kun Askari ugu dambeen 28-ka Bisha Feebaraayo ee Sanadka soosocda.
Afhayeenka Ciidanka Burundi Colonel Floribert Biyereke ayaa war uu soo saaray waxaa uu ku sheegay in Dowladdiisu ay midowga Africa weeydiisan doonto in tiro siman ay Howgalka Soomaaliya ka dhiman dhamaan Dalalka AMISOM ka tirsan intii Burundi kaliya lagu koobi lahaa.
Dalka Burundi waa Wadanka Labaad ee Ciidanka ugu badan ku leh Howlgalka AMISOM oo Dowladda Soomaaliya ka Caawiya la dagaalanka Al-shabaab iyo sugidda Amniga.
Waa 5,400 Ciidanka Burundi ee jooga Soomaaliya, waxaana Midowga Africa uu Codsaday in 1000 Askari laga yareeyo dhamaadka Bisha Labaad ee sanadka soo socda kadib shir guddiga isku xirka Howlgalka AMISOM ay ku yeesheen Magaaladda Adis Ababa Bishii Novemver.
Qorsha loo dejioyay ka bixitaanka AMISOM ee Soomaaliya ayaa waxaa uu dhigayaa in Ciidanka si tartiib tartiib ah dalka looga saaro
Shaqaale ka tirsanaa Dowlada oo lagu dilay Muqdisho.